Dacomitinib समीक्षा: NSCLC कसरी व्यवहार गर्ने?
阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी .
एफडीएले मेटास्ट्याटिक गैर-सानो सेल फोक्सोको क्यान्सरको लागि डकोमिटनिबलाई अनुमोदन गर्यो गैर-सानो सेल फेफडा क्यान्सर के हो? गैर-सानो-सेल फेफड़ोंको क्यान्सरमा Dacomitinib क्लिनिकल अनुप्रयोग Dacomitinib समीक्षा Dacomitinib कार्यको तंत्र Dacomitinib उपयोग Dacomitinib साइड इफेक्ट गैर-सानो सेल फेफडाको क्यान्सर उपचार: Dacomitinib VS Gefitinib कसरी Dacomitinib पाउडर अनलाइन खरीद गर्ने? एफडीएले मेटास्टेटिक गैर-सानोको लागि dacomitinib स्वीकृत […]
लेन्वाटनिबको इतिहास लेन्वाटनिब भनेको के हो? लेन्वाटनिब कार्यको संयन्त्र लेन्वाटनिब केको लागि प्रयोग गरिन्छ? तपाईंले लेन्वाटनिब प्रयोग गर्दा कुन साइड इफेक्टहरू मैले याद गर्न सक्दछु? लेन्वाटनिब क्लिनिकल नतीजा (एफडीए स्वीकृति) मैले लेन्वाटनिब कहाँ राख्नु पर्छ? सम्बन्धित ड्रग्स: लेन्वाटनिब मेसिलेट (CAS: 857890-39-2) हामी कहाँ लेन्वाटनिब अनलाइन किन्न सक्छौं? लेन्वाटनिबको इतिहास I चरणको क्लिनिकल परीक्षण […]
EL Ceritinib विवरणमा Ceritinib प्रयोगको लागि अनुमोदित भएको थियो कसरी Ceritinib NSCLC उपचारको लागि काम गर्दछ? कसरी Ceritinib चिकित्सा उपयोगहरूको बारेमा? कसरी Ceritinib (LDK378) भण्डारण गर्ने? Ceritinib को साइड इफेक्ट के हो? अध्ययनमा देखाईएको छ कि सेरिटिनिबका अरू कस्ता फाइदाहरू छन्? सेरिटिनिबले पहिलो-लाइन एफडीए स्वीकृति प्राप्त गरे
एन्टी-क्यानर्स (एनएससीएलसी) मा अफातिनीबको बारेमा Questions प्रश्न
अफातिनीब के हो? जब हामीलाई अफातिनीब चाहिन्छ? अफटानिबले कसरी काम गर्दछ? के अफातिनीब एफडीए द्वारा अनुमोदित थियो? पक्का निश्चित जोखिम / साइड इफेक्टले Afatinib ले हुन्छ? अफातिनीबको बारेमा अरू के अनुसन्धानहरू? अफातिनीब के हो? अफातिनीब (सीएएस: 439081 182०XNUMX१-१-XNUMX-२) एक लक्षित थेरेपी औषधि हो जुन जिओट्रिफ पनि कहलाइन्छ। यो गैर-सानो सेल फेफड़ोंको क्यान्सर (NSCLC) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ […]
एफडीए कोलोरेक्टल क्यान्सर 丨 GIST 丨 HCC रेगोरेंफेनीब उपचार स्वीकृत भयो
Regorafenib के हो? किन Regorafenib एफडीए द्वारा अनुमोदित छ? कसरी Regorafenib काम गर्दछ? Regorafenib मुख्य केको लागि प्रयोग गरिएको छ? Regorafenib का कस्ता फाइदाहरू अध्ययनमा देखाइएको छ? Regorafenib ले ल्याउन सक्ने जोखिम / साइड इफेक्टले के गर्न सक्दछ? म कसरी भण्डारण र / वा Regorafenib बाहिर फाल्न सक्छु? भविष्यमा Regorafenib निष्कर्ष को दिशा निर्देशन Regorafenib के हो? रेगोरफेनिब (सीएएस: 755037 03०7-०XNUMX-XNUMX), […]